पोखरामा परेको असिनाले सडक नै छोपियो, हटाउन डोजर प्रयोग ! « KBC khabar
पोखरामा परेको असिनाले सडक नै छोपियो, हटाउन डोजर प्रयोग !
८ फाल्गुन २०७८, आईतवार १९:१५
काठमाडौं, ८ फागुन । पोखरामा आज बाक्लो असिनासहित पानी परेको छ । असिना पानीले पोखराको सडक केहीवेर अवरुद्ध भएको थियो । पोखराको न्यूरोड, चिप्लेढुंगा, बगर, अमंरसिह चोक, रानिपैवा भागमा असिनाले सडकनै छोपीएको थियो । सडमा परेको असिना हटाउन डोजरको प्रयोग गरिएको थियो । “असिनाले गुडिरहेका सवारीसाधन रोकिएका थिए्, बाटो हिँडिरहेका मान्छेहरु ओत बसेका थिए् । सडकमा व्यापार गरेर बसेका मानिसहरु बिचल्लीमा परेका थिए” स्थानीय थम्मन ठकुरीले बताउनुभयो । असिनाले यहाँको जनजीवन प्रभावित बनेको छ ।